Umhlahlandlela Womnikazi We-Puggle: I-Action-Packed Pug Beagle Cross Breed - Izinhlobo
Umhlahlandlela Womnikazi We-Puggle: I-Action-Packed Pug Beagle Cross Breed
IPuggle, eyaziwa nangokuthi i-pug beagle mix (ngenxa yabazali bayo abangaxutshwe nalutho), iyinja enothando, enenhlalo nenothando esheshayo iba ngesinye seziphambano zenja ezithandwa kakhulu e-US.
Uhlakaniphile, unomdlandla futhi unelukuluku lokwazi; le nja inguhlobo lwesiphambano nabazali bakaPug noBeagle.
Banobuhle obungenakuphikiswa nobuntu obuhle obenza babe uhlobo olufanele oludumile nabangane nomaphi lapho beya khona!
Isimo sabo sobudlelwano nokuhambisana kwabo nezingane, nezinye izilwane ezifuywayo zomndeni, kubenza babe umngane omuhle.
Kulesi sihloko sibheka konke odinga ukukwazi mayelana nalolu phiko lwe-pug beagle cross breed kufaka phakathi; ubuntu, isikhathi sempilo, umlando nemvelaphi, izidingo zokunakekelwa kanye nokucatshangelwa kwezempilo.
Inhloso Inja Yomklami
Ifanele i- Inja enobungane ehambisana nezingane; okwenza i-pug beagle iwele ukuhlanganisa okuhle komndeni.
Usayizi 13 kuye ku-15 ”(owesilisa) no-10 kuye ku-13” (owesifazane)
Isisindo Amakhilogremu angama-20 kuye kwangama-30 (owesilisa) noma amakhilogremu angama-20 kuye kwangama-25 (abesifazane)
Isikhathi sokuphila Iminyaka engu-10 kuya kwengu-15
Ukuhluka Kwemibala Ijazi ngokuvamile: Tan, Fawn noma Rich Brown
Isimo Unelukuluku, uzimele, uyathandeka futhi akesabi
Ukuzivocavoca Nsuku Zonke Okumaphakathi - Bazokhombisa ukwenza okungajwayelekile ngokuqhuma okufushane futhi okukhulu
Amaleveli Womsebenzi Okumaphakathi - Dinga ukuzivocavoca imizuzu engama-40 usuku ngalunye
Ukusetshenziswa Kokudla Kwansuku zonke Phakathi kwama-calories angama-500 kuya kwangu-700 usuku ngalunye
Izinkinga Ezaziwayo Zempilo Amakhala aqhiniwe, ukuphefumula okunomsindo, iso le-cherry, ukutheleleka kwezindlebe kanye ne-hip dysplasia
Umlando Wokuhlanganiswa Kwe-Beagle Pug
Ubuntu be-Puggle kanye ne-Temperament
Ungayinakekela Kanjani Iphakethe
Izidingo Zokuzivocavoca Ze-Pug Beagle
Ukubukeka kokuzala: Ijazi nombala
I-Puppy Puggle yahlala ehlathini.
Lapho umama we-puppy eyi-Beagle futhi ubaba eyi-Pug une-puppy Puggle!
Le nja idabula phakathi kwezinhlobo zezinja zePug nezinsikazi zeBeagle.
Umama kumele abe yiBeagle ngaso sonke isikhathi, futhi ubaba abe yiPug , ngenxa ye- izinkinga zezempilo ezaziwayo wenja enkulu yesilisa ekhwelana nowesifazane omncane.
Udoti ojwayelekile uzoba nomdlwane osukela kwamathathu kuya kwayisikhombisa, kanti emihlanu iyafana, futhi izobiza ngaphezulu kwama- $ 400.
I-Puggle ifakwa ngokukhwelana ne-Pug yowesilisa neBeagle yesifazane.
Inja yaqale yazalelwa ngokusemthethweni, yaqanjwa futhi yabhaliswa nguWallace Havens waseWisconsin ngawo-1990s kwakhiwa ingxube yeBeagle nePug.
Izinja ezifuywayo ezizaliswayo ziye zasetshenziswa amakhulu eminyaka ukuzama ukuthatha isimo esihle nezimpawu kusuka ku-purebred futhi kususwe ukwahluka okungafuneki noma ukukhubazeka kofuzo.
Inhloso yamaHavens kwakungukudala inhlanganisela yeBeagle-Pug eyayigcina izici ezinhle kakhulu zohlobo ngalunye futhi isuse ezinye zezinkinga zezempilo ezihambisana namaPugs.
Izici ezinhle nezimbi zokuzala zamaPugs namaBeagles
Izici Ezihle Zokuzala
Izici Ezimbi Zokuzala
Ubuhlakani nebhantshi elifushane elicwebezelayo elivela eBeagle Iphunga elifushane le-Pug elibangela I-Stenotic Nares
Umzimba weStocky thicket, Ubuso obugobekile kanye nomsila we-Screw ovela ePug Ukuthambekela kweBeagle ukuzulazula
Isimo esihle kakhulu salolu hlobo uhlobo lothando lwe-Pug ngesimpumulo eside seBeagle.
Kusukela ngeminyaka yama-1990s, lolu hlobo lwakhula kakhulu ekuthandweni ukuba lube ngesinye sezihlahla ezithandwayo kakhulu e-US kusuka ngo-2004-2010; ukunyuka ngo-2005 nabanikazi bosaziwayo abanjengoSylvester Stallone noKelly Osborne.
Ukukhuphuka kwabo ekuthandeni kungenxa yokubukeka kwayo okuhle, isimilo sothando esimnandi nemvelo yezenhlalo.
Njengoba kuvela abafuyi abaningi basebenze ukuzama ukudala ukubukeka okujwayelekile nobumnene.
Eminye imidlwane ibuyiselwe emuva ngePug edala ukuhlukahluka kwePug-Puggle; ngakho-ke, ukuzuza njengefa izici nezici ze-Pug.
Ziyinhlanganisela ye-beagle-pug! Hhayi i-Pug-Puggle.
Ngokuvamile zizalanisa isizukulwane sokuqala phakathi kweBeagle nePug.
IPuggle iyinja enothando, edlalayo futhi enamandla.
Le nja izozwana kahle kakhulu nezingane, ezinye izinja nezilwane ezifuywayo zasekhaya; kubenza bakwazi ukungena empilweni yomndeni ejwayelekile!
Ukuhlakanipha kwabo kubaholela ekutheni bahlale bedinga ukunakwa; ukuzenza izilwane ezifuywayo ezifanelekayo.
I-Pug Beagle Cross 'izosheshe ibe yisilwane sasekhaya esiyintandokazi kakhulu ukuba ngumlingani odlalayo nothando.
Le nja yaziwa njenge- 'snuggler' ngenxa yokusondelana kwabo njalo nothando lokulala ngokuthinta omunye umuntu.
Njengomama wabo uBeagle, bayinja ehlakaniphile kakhulu. Ngalobuhlakani kwesinye isikhathi kuza inkani.
Banekhono lokuzihlanganisa, ngenxa yobuhlakani babo, noma kunjalo bazodinga kaningi ukuqeqeshwa kokuqinisa umthetho kusukela ngisemncane.
Qaphela - Ukulamba ukunakwa kweBeagle Pug Hybrid kuzoholela ekuziphatheni okunenhlekelele nefenisha ehlafunwayo! Ngenkathi ububi babo kanye nama-antics adume kakhulu kungahlekisa. Bayashesha ukubhoreka futhi babe nesizungu abakutholi ukunakwa kaningi.
Ngazo zonke izici ezinhle, kuza izinkinga zokuziphatha ezingafuneki;
Ukuzula (bheka isigaba sokuhamba / sokuqeqesha ngezansi)
Ukukhonkotha kuvela kozalo lwabo lwePug ngenkathi ukuhewula kanye nenkani kuyizindlu zohlobo lokuzingela lweBeagle.
Ngokuvamile bahewula, ngaphezu kokukhonkotha, ikakhulukazi ngenkathi besala bodwa; khumbula isidingo sabo sokunakwa?!
Inja yakho ngokujwayelekile izokhombisa kuphela izinkinga zokuziphatha ngenkathi inesithukuthezi noma ukunakwa kulambile futhi akuvamile ukukhombisa ubudlova kanti ngenkathi amagxolo abo ekhombisa ukuthi bazokwenza inja enhle yokuqapha; abakwenzi!
Ngokuqinisekile bayinja yasendlini.
Inja okufanele inikezwe uthando, ukunakwa futhi ngokuqinisekile ayinamahloni.
I-pug-beagle crossbreed ithanda UKUDLA ... noma nini, noma ngabe ikuphi!
Ngeshwa, iPuggle inesifiso esingaphezu kwebhalansi yemvelo futhi izizidla kalula ngokweqile, ingafaneleki futhi ingenampilo.
Kufanele uqaphele kakhulu ngokweqile ngenja yakho.
Ukuthi inja kufanele idle kangakanani kuncike ezintweni eziningi; ubudala, isisindo, umzimba kanye namazinga womsebenzi.
Khumbula izinja zifana nabantu nje; ngamunye!
Umnikazi uhlala njalo umuntu ongcono ukweluleka ngokuthi inja yakhe kufanele idle malini; ukuhlinzeka ukuthi banolwazi oluyisisekelo lokudla okunempilo.
Ngokufanele uzofuna ukondla iBeagle Pug Hybrid yakho phakathi kwama-calories angama-500-700 uma esevuthiwe.
Iphakethe lidla malini?
Inja yakho idinga amakholori amangaki usuku ngalunye
Owesilisa Ama-calories angu-1,400 Ama-calories angu-700
Owesifazane Ama-calories angu-1,100 Amakholori angama-500
Lawa makhalori kufanele alinganise phakathi kwama-carbohydrate, amaprotheni namafutha.
Ukulungiswa okuncane kufanele kwenziwe ekudleni kwenja yakho uma kuthola noma kuncipha.
Ngakho-ke, umbuzo uthi-ke, yini okufanele uyondle umdlwane wakho omusha?
Ukudla kwenja esezingeni elomile kuphela.
Ngokufanelekile, phaka usayizi omncane wokuphaka inkomishi eyodwa yokudla kwenja eyomile kabili ngosuku ngenja evuthiwe.
Inombolo yezinkomishi zokondla iPuggle yakho usuku ngalunye
Owesilisa 5 izinkomishi ngosuku 2 izinkomishi ngosuku
Owesifazane 4 izinkomishi ngosuku 1.5 izinkomishi ngosuku
Ukuze ubale ngokunembile ama-calories edingekayo enja yakho sebenzisa lokhu kulondolozwa kwesisindo okunempilo kwemidlwane nezinja.
Njalo thintana nodokotela wezilwane uma unemibuzo ethile ngokudla kwenja yakho.
Bayinja esebenzayo kakhulu.
Umsebenzi wabo wenzeka ngamafuphi 'njengembungulu' kunezikhathi ezinde ezisebenzayo. La mandla avela ku-Beagle.
Kukhona umehluko phakathi kwezinja ezinamandla nezisebenzayo.
Inja enamandla (isb. Weimaraner) idinga inani elikhulu lokuhamba nokuzivocavoca, kanti inja esebenzayo idinga ukuzivocavoca umzimba nengqondo. Ngenhlanhla, hhayi ukuzivocavoca umzimba njengenja enamandla!
Kufanele ahambe kabili ngosuku imizuzu ephakathi kwengu-15 kuya kwengu-20.
Kubalulekile ukugcina inja yakho ku-leash ngesikhathi sokuhamba.
Njengoba omama babo beBeagle bezingela ama-hounds; uzoba nokuthambekela okungafuneki kokulahlekelwa ukugxila futhi angayinaki imiyalo ngu belandela amakhala abo ngenkathi kuphuma emphakathini ekuhambeni; ikakhulukazi uma kuyiphunga elithandekayo njengenye inja!
Ungafaka okunye kokuhamba kwansuku zonke kweseshini yokuzivocavoca inja yemizuzu eyi-10 ngesikhathi sobusha ukusiza ukuqeqesha nokuvivinya umdlwane wakho!
Qiniseka ukuthi akafinyeleli esimweni sokukhathala.
Njengoba uPuggle kwesinye isikhathi ehlupheka ngezinkinga zokuphefumula (bheka isigaba sezempilo ngezansi) kubalulekile ukuthi ulawule ukusebenza kwabo ngokomzimba; ikakhulukazi umsebenzi okhandlayo.
Umnikazi ofundisa iPug Beagle Cross ukuhlala
Ukuqeqesha inja ehlakaniphile kwesinye isikhathi kungaba yinselele, ikakhulukazi kubanikazi bezinja abasha.
Njengoba inja yakho izohlala isesimweni sokunyakaza (isb.ukudlala, ukujaha noma ukugijima) banombono wokuthi kunzima kakhulu ukuyiqeqesha.
Kodwa-ke, njengenhlanganisela ehlakaniphile, kulula ukuyiqeqesha ngokulingene.
Uzodinga izinto ezine uma kukhulunywa ngokuqeqeshwa:
Ukuqinisa Okuhle (isb. Ukudlala nokuphatha)
Ukuzibandakanya kwasekuqaleni nezinye izinja
Ngenkathi ukuqeqeshwa kungaba nzima, uma umnikazi ekhombisa ukubekezela nokusebenzisa ukuqeqeshwa okususelwa kwizibopho , eqiniswa kahle, uzoba ne-A + Puppy!
Izinga labo eliphakeme lobuhlakani lisho ukuthi bafunda ngokushesha futhi bangafunda kakhulu kunenja ejwayelekile.
Ngenhlanhla, uma uqeqesha inja yakho kusukela isencane, amasonto ayi-8, unenja ehlakaniphile futhi eqotho ezolungiswa kahle impilo yomndeni.
Njengoba ezohlakanipha qiniseka ukuthi izikhathi zokuqeqesha ziyathakazelisa futhi ziyavuza.
Umvuzo omuhle kakhulu wePug Beagle Hybrid yisidlwana esincane; ngenxa yothando lwabo lokudla (funda kabanzi esigabeni sokudla esingezansi).
Ngesikhathi sokuqeqeshwa qiniseka ukuthi ulungisa nomdlwane wakho.
Lokhu kudala isibopho ngenkathi kuvumela nesilwane sakho ukuthi sijwayele inqubo.
Inja engafundile iyoba nenkani enkulu, ingalaleli futhi ibe nonya.
Ukuhlangana nomdlwane kubalulekile ukuvimbela amahloni
Kufanele asheshe azihlanganise nabantu. Kusekuseni kakhulu.
Ukuzijabulisa injana yakho kuwumsebenzi olula kakhulu ngenxa yobuhlakani babo bemvelo, ilukuluku kanye nemvelo yezenhlalo.
Ukuzijabulisa kufanele kuqale ekhaya, nezingane, ezinye izilwane ezifuywayo, imisindo nangokuhlangana nezinto eziningi ezintsha.
Ukudalula inja yakho ezindaweni eziningi ezahlukene, imisindo, kanye nokuhlangenwe nakho kuyinto enhle.
Lokhu kusiza ukuvimbela inja yakho ekubeni namahloni.
Uma usulungele umhlaba wangaphandle, amakilasi enja yokuzijabulisa nokulalela ayindlela enhle yokusiza i-canine yakho ifunde imikhuba ethile eyisisekelo.
Uhlobo lwe-Pug Beagle Cross luyinja yesondlo esilula ephansi.
Kokubili iPug neBeagle banengubo enezinwele ezimfishane okuyisondlo esiphansi, ngenxa yalokho, inja yakho nayo.
Ukumhlomisa kufanele kube yingxenye ejwayelekile yokubanakekela ngenkathi futhi kukunika amandla okwakha isibopho nePuppy yakho:
Ukuxubha inja yakho kuyingxenye ebalulekile yenqubo yokulungisa inja enempilo.
Ukunciphisa noma ukubumba ngezikhathi ezithile kuyodingeka; kodwa-ke, kunconywa ukuxubha kabili ngeviki ukunciphisa izinhlayiya zezinwele ze-pooch yakho njengoba bobabili abazali bayo bechitha izinwele.
Ngenkathi ezobe enezinwele ezimfishane, UZOYEKA!
Kufanele uchithe imizuzu emihlanu, kabili ngesonto, uxubha ibhantshi lenja yakho ngebhulashi elithambile. Lokhu kususa izinwele ezifile noma ezixegayo, kuvimbela izimo zesikhumba noma izinambuzane futhi kuvimbele ukuqubuka.
Ukuxubha nakho kusabalalisa ngokulinganayo uwoyela wesikhumba wemvelo phezu kwesikhumba noboya babo okunikeza iPuggle ijazi labo elidumile elicwebezelayo!
Kungumqondo omuhle futhi ukungeza kokunye ukuhlolwa kwezempilo nokunakekelwa ngesikhathi senqubo yakho yokuxubha:
Xubha amazinyo abo ukuvimbela ukubola kwamazinyo nesifo sezinsini.
Hlola amehlo abo ukuqinisekisa ukuthi awanakho ukungcola noma ukukhipha.
Qiniseka ukuthi awugezi injana yakho kaningi; kuhle kufanele ugeze inja yakho kanye njalo ezinyangeni ezimbalwa.
Ngesikhathi sokugeza qiniseka ukuthi uhlola amafolda ebusweni benja yakho obushubile. Geza phakathi kwawo ukuze ususe ukungcola namagciwane okusiza ukugwema ukutheleleka.
I-Puggle iyinhlobo ehlukile futhi edume kakhulu yesiphambano enenhlanganisela ye-pug ne-beagle.
I-Pug Beagle Crossbreed akuyona i-purebred, akukho ukuvumelana okungako kwezinga eliqashelwayo lozalo.
Ngenxa yalokhu alikho iklabhu lekennel elikhulu (isb. I-American Kennel Club noma ICanada Kennel Club ) uqaphele uhlobo lohlobo njengohlobo olubhalisiwe njengoba kungelona uhlobo lozalo.
Kodwa-ke, isibonelo esijwayelekile sizoba nemilenze emifushane, umzimba oshubile onesiqu onamehlo amakhulu kanye nesifonyo esimnyama esinomsila wesikulufu.
Ubuso babo obudumile obugobekile nejazi elicwebezelayo
Izindlebe, umzimba omude nomlomo omude okuvela ekubukekeni okudumile kwePuggle kuvela kumama wabo weBeagle, ngenkathi ubuso babo obufuthwe, imilenze emifushane, izindleko, amehlo amakhulu ezinsana nomsila wokugoqa kuvela kubaba wabo wePug.
Ibukeka ngokufana neMastiff encane, umbala wabo wejazi ujwayelekile:
Ijazi labo kwesinye isikhathi linemaki elincane elimhlophe noma elimnyama nesifihla sobuso esimnyama esivela kubaba wabo wePug.
Banengubo ephindwe kabili ehlala imfishane futhi iqonde ngomphetho obushelelezi futhi ocwebezelayo. Ukuqedwa okucwebezelayo kungenxa yebhantshi elithe ukuba lide elimboze ingubo yangaphansi emfushane futhi eminyene.
Uboya bale nja akufanele bube yi-wavy noma i-curly.
Akuyona inja ye-Hypoallergenic njengoba ikhipha ijazi layo njalo ikhiqiza i-dander eningi.
Inja Dander ukuqhuma kwesikhumba okukhishwe yizinja okuvame ukudala ukusabela kubantu abanezinkinga zokugula.
I-Puggle ngokuvamile iyisizukulwane esinempilo futhi esijabulisayo esiphambanweni.
Njenganoma iyiphi Inja, bathambekele ezinkingeni zezempilo zofuzo.
Ngeshwa, uzalo lwabo lunePug; edume kakhulu ngezinkinga zokuphefumula ngenxa yempumulo yazo emfushane.
Ngenhlanhla, le nja ayithambekele kakhulu ekuhlushweni yizinkinga ezifanayo zokuphefumula, ngenxa yokuzuza njengefa impumu ende kunina wabo uBeagle.
Kodwa-ke, ezinye izinja zitholakale ukuthi zinenkinga yamakhala abanjiwe (i.e. ama-naen stenotic ).
Ngenxa yalokho, lokhu kubangela ukuphefumula okunomsindo, ukuhogela nokuthimula, futhi kwesinye isikhathi izinkinga zokuphefumula njengokuphefumula ngesikhathi nangemuva kokuzivocavoca kanzima.
Uma kuqhathaniswa ne-Pug, i-Beagle, iyinja enamandla kakhulu futhi enempilo ehlushwa ukugula noma izifo ezithile ezimbalwa kakhulu.
Zithambekele ekuthelelekeni kwamehlo nele-cherry ngenxa yosana olukhulu lwePug njengamehlo.
Lolu hlobo lunezindlebe ezidumile ze-floppy, ngenxa yalokho, zithambekele ekuthelelekeni kwezindlebe njalo, kufanele uhlanze izindlebe zazo masonto onke ukuze unciphise ukutheleleka.
Kukhona nezinkinga ezivamile zezempilo, i-agnostic ezinhlotsheni ze-Pug ne-Beagle, njenge-hip umabhebhana nesifo sokuwa.
Kufanele uqiniseke ukuthi uthenga umdlwane wakho kumfuyi onedumela; lapho izinja zikhuliswa khona ngokugcwele, hhayi ngokweqile, futhi landela uhlelo lokugoma olunamandla oluhlanganisa amarabi nezinye izifo ezaziwayo .
Ngakho-ke, ucabangani ngePuggle lapho?!
Kuhlanganiswe namazinga abo aphakeme obuhlakani nelukuluku lolu hlobo oluyingqayizivele lwe-beagle pug cross luqukethe okuningi ukunikela!
Sicela uzizwe ukhululekile ukuhlanganyela nathi ulwazi lwakho ngalolu hlobo oluyingqayizivele kanye nabafundi bethu emazwaneni angezansi.
ukuhlanganiswa kwe-pomeranian ne-husky
ibhu yesiliva ibukeka kanjani
i-pitbull mix ne-labrador puppy
kungani inja yami yomile?
inkosi yamahhashi uCharles x bichon frize
amagama abesifazane abizwa ngama-husky nezincazelo